Tag: Ciidanka | Sagal Radio Services
Maxkamadda Ciidamada oo u digtay Mas’uuliyiinta dowladda iyo Ilaaladooda
Sagal Radio Services • News Report • May 5, 2017
Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada qalabka sida ayaa digniin u dirtay Mas’uuliyiinta dowladda iyo Ilaaladooda oo lagu eedeeyay inay qal qal gelin ku hayaan shacabka, xilliyada ay waddooyinka marayaan.
Taliska Ciidanka Milateriga oo faah faahin ka bixiyay howl galka ka socda Sh/Dhexe
Sagal Radio Services • News Report • May 6, 2016
Taliska Ciidanka milateriga Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixiyay howl galada ka socda deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe, kadib markii shalay Ciidamada ay la wareegeen tuulooyin hoos-taga degmada Ruun-Nirgood.
Munaasabado lagu xusayo maalinta ciidanka xoogga dalka ee 12-ka April ayaa maanta laga xusayaa magaalada Muqdisho, iyadoo tan iyo shalay magaalada laga dareemayay diyaar garowga loogu jiro xuska.
Sagal Radio Services • News Report • March 10, 2016
Ciidamada Kumandoska xooga dalka ee sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano Danab ayaa ka qeyb qaatay weerarkii habeen hore ka dhacay degmada Aw-dheegle oo qiyaastii magaalada Muqdisho dhanka galbeed kaga beegan illaa 60KM.
Ciidamada Kenya oo diley guddoomiyihii deegaanka Ceelcadde
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo Kenya ay dileen guddoomiyihii deegaanka Ceelcadde C/rashiid Cali Cabdi Qoorleex.
Boqolaal ka tirsan Ciidamada Turkiga oo gudaha u galay Ciraaq
Boqolaal ka tirsan Ciidamada Turkiga oo wata taangiyo ayaa ka tallaabay xuduuda, iyagoo gudaha u galay Ciraaq, gaar ahaan deegaanada ay maamulaan Kurdiyiinta.
Ciidamada AMISOM ee Kenya oo lagu eedeeyay inay canshuuraan dhuxusha iyo sokorta
Sagal Radio Services • News Report • November 12, 2015
Kooxda cadaadiska dalka Kenya oo fadhigoodu yahay Kenya ayaa soo saartay warbixin sheegeysa inay hayso cadeymo la xiriira ku lug lahaanshaha ciidamada Kenya ee dalka Soomaaliya jooga ganacsiga sharci darada ah ee Sokorta iyo Dhuxusha dalka Soomaaliya.
Naafada degen Isbitaal Martini oo ka codsaday dowlada in aan laga rarin isbitaalka
Sagal Radio Services • News Report • August 30, 2015
Ciidamadii ku naafoobay dagaalkii 1977dii kuna nool qeybo ka mid ah Isbitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho ayaa ka codsaday dowlada Federalka in aan laga rarin halka ay degen yihiin maadaama sanooyin badan ay ku noolaayeen.
Ciidamada Ammaanka Gaarisa oo qabtay hub iyo dadkii watay (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • August 26, 2015
Ciidamada Ammaanka magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa gacanta ku dhigay rag iyo haween lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, kuwaasoo lala soo qabtay hub.
Ciidamada Itoobiya oo lagu eedeeyay inay isticmaalaan awood ka baxsan waajibaadka AMISOM
Ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ayaa lagu eedeeyay inay adeegsadaan awood dheeri ah oo ka baxsan howl galka AMISOM, kadib markii ay soo baxday in dhowaan ay fara geliyeen maamulo ka jira gobolada dalka.
Ciidamada Dowladda Somalia iyo kuwa AMISOM oo Howlgallo kawada Magaalada Muqdisho
Ciidamada Amniga Somalia ayaa howlgallo kawada saaka Qaybo ka mid ah Muqdisho, iyadoo howl-galkan Xooggiisa uu ka socdo Degmada Hodan, iyadoo Ciidamadu ay Gacanta ku dhigeen hub iyo dad ay uga Shakiyeen inay Al-shabaab ka tirsan yihiin.
General Muqtaar Xuseen Afrax oo loo magacaabay Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta digreeto ka soo baxday xafiiskiisa ku magacaabay taliye ku-xigeenada ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Imaaraadka Carabta oo Gaadiid ciidan ugu deeqday Ciidamada Booliska Soomaaliya (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • June 11, 2015
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku wareejisay Wasaaradda Amniga Gudaha ee dowladda Soomaaliya Gaadiid ciidan, booyadaha biyaha qaada iyo qalab kale oo loogu tala galay Ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
Ciidanka Mareykanka oo lagu eedeeyay inay ku Dhaqamaan Midab-kala-sooc
Dil ay ciidamada amniga Mareykanka sannadkii hore u geysteen wiil madow oo lagu magacaabi jiray Michael Brown ayaa ka dhaliyay dalkaas qalalaase.
Ciidamada Ammaanka oo saaka ilaa xalay baaritaano ka wada qeybo ka tirsan degmada Wadajir
Sagal Radio Services • News Report • January 19, 2015
Ciidamada Ammaanka ayaa howl gallo ballaaran ka wada xaafado ka tirsan degmada Wadajir, iyadoo howl galka intiisa badan uu ka socdo xaafada Buulo Xuubey oo ku dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Maxkamada ciidamada Qalabka sida oo saakay dil toogasho ku fulisay Saddex ruux oo labo ay askari ahaayeen
Sagal Radio Services • News Report • December 4, 2014
Maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa saakay dil toogasho ah ku fulisay saddex ruux oo labo ka mid ah ay ahaayeen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda, kuwaasoo horay dilal u geystay, iyadoo maxkamada ay dil toogasho ku xukuntay, markii la sheegay in lagu helay dambigaas.
Daawo Sawirada Xukun Dil ah oo lagu riday Lix Nin oo lagu eedeeyay in ay katirsanaayeen Al-Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • November 18, 2014
Maxkamada ciidanka qalabka sida ee Gobolada Bari, Karkar, Gardafuu, Sanaag iyo Heylaan ee Maamulka Puntiland ayaa xukun dil ah ku riday Lix nin oo lagu eedeeyay in ay katirsanaayeen Xarakada Al-Shabaab.
Deg Deg:- Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo Saaka Xukun Dil ah Fulisay
Sagal Radio Services • News Report • October 26, 2014
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Saaka Labo Ruux oo la sheegay in ay yihiin Al-shabaab Xukun Dil ah ku Fulisay,waxaana Labadaan Gacan ku dhiigle ay ahaayen Ragii dilay Wariye Maxamed Maxamuud”Timacade’
Maxkamada ciidamada oo dil ku xukuntay askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • September 28, 2014
Maxkamadda ciidamada xoogga dalka ayaa maanta xukun dil ah ku ridday saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Somalia, kuwaasoo lagu eedeeyay inay dad shacab ah dhac ugu geysteen waddada isku xirta Muqdisho iyo degmada Afgooye.
Ciidamada Itoobiya oo Garbahaarey ku Xiray Xubno ku eedeysan kicin Dagaal
Sagal Radio Services • News Report • August 2, 2014
Ciidamada dalka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM aya la sheegay inay xabsiga dhigeen lix qof oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dagaal shalay ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna gudaha degmada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo.
Ciidamada AMISOM ee ka socda Itoobiya oo dhaq dhaqaaqyo ciidan ka bilaabay Galgaduud
Sagal Radio Services • News Report • March 1, 2014
Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamo hor leh oo ka socda Itoobiya ee ka mid noqday howl galka AMISOM ayaa shalay gaaray magaalada Guriceel, iyagoo dhaq dhaqaaqyo ciidan ka bilaabay.